गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । पाँच दिनअघि पोखराको एक परिवारले आफन्तसहित भेला भएर जन्मदिनको उत्सव मनायो । त्यो ‘बर्थ डे पार्टी’मा करिब २० जना सहभागी थिए । उनीहरुमध्ये केहीलाई ज्वरो र रुघाखोकी लाग्यो । परीक्षण गर्दै जाँदा सहभागी १७ जनालाई कोभिड पोजेटिभ देखियो । संक्रमितमध्ये एक जनालाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो । अस्पताल भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।
पोखरा–१३ मा ७१ वर्षीय वृद्ध घरमै थिए । उनलाई एक्कासी स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्‍यो । परिवारका अनुसार उनमा कुनै दीर्घ रोग थिएन । कमजोर महसुस गरेको बताएपछि चरक मेमोरियल अस्प्तालमा लगे । त्यहाँबाट बेड छैन भनेर भनेर पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्‍याए । मणिपालमा पनि बेड नपाएपछि फेरि बेड मिलाएर चरकमा ल्याए । कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो । अक्सिजन सपोर्ट दिएपछि ठीक देखिएका उनको भोलिपल्ट मृत्यु भयो ।
एक्कासी स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर २७ गते चरक मेमोरियल अस्पताल पुगेकी पोखरा–७ की ४५ वर्षीया महिलामा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो । आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचाररत उनको भोलिपल्ट २८ गते नै मृत्यु भयो ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमित हुने र उपचार पाउँदा-नपाउँदै मृत्यु हुने संख्या बढ्दो छ । घरमै बसिरहेका भर्खरका तन्नेरीदेखि यसअघि कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएका बुढा-बुढीले समेत ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो १० दिनमा ९४ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये ५१ जना कास्कीका छन् । वैशाखभरी गण्डकीमा १११ जनाको मृत्यु भएको छ, उनीहरुमध्ये ५९ जना कास्कीका मात्र छन् । बिहीबार मात्र गण्डकी प्रदेशमा १४ जनाको मृत्यु भयो । बुधबार १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । २५ गते १२ जना, २६ गते १३ जना र २७ गते १२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘कोरोना संक्रमण दर हेर्दा हामी एकदमै जटिलतामा छौं । सामान्य रुपको देखिराखेको कोरोनाभन्दा धेरै फरक प्रकृतिको हामीले बेहोरिरहेका छौं,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. शर्माले भने, ‘अझै एक महिना संक्रमणसँगै मृत्यु बढ्नसक्छ, ।’
प्रदेशमा सबभन्दा बढी जोखिममा राजधानी पोखरा छ । वैशाखमा मात्र कास्कीमा ३ हजार १८६ जना संक्रमित थपिएका छन् । जबकी चैत मसान्तसम्म ४१६ जना मात्र थिए । सिंगो प्रदेशमा पनि त्यसरी नै संक्रमण बढेको छ । वैशाख पहिलो हप्तासम्म ४१६ जनामात्रै सक्रिय संक्रमित रहेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले ७ हजार ३१ जना पुगिसकेको छ ।
अस्पतालहरु संक्रमितले भरिउका छन् । पोखरामा सरुवा रोग तथा संक्रामक अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलसन जटिल बिरामीले भरिइरहेका छन् । निजी अस्पतालका कोभिडका बेडहरु पनि भरिभराउ भएका छन् । संक्रिय संक्रमितमध्ये ६ हजार ८६८ जना होम आइसोलेसनमा छन्, तर उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निगरानी हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा वीरगञ्जमा कोरोनाबाट थप १३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नारायणी अस्पतालमा ४, नेशनल मेकिडल कलेजले बाबा होटलमा सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालमा ३, भवानी अस्पतालमा २, नारायणी बयोधा अस्पताल, स्पर्श मल्टि स्पेस्यालिटी हस्पिटल, प्रभु हस्पिटल र वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा १-१ जना गरी १३ जनाको मृत्यु भएको हो । बिहीबार मृत्यु भएका १० जना पर्साका र ३ जना बारा जिल्लाका हुन् ।